Yini umndeni ophethe iphupho ngawo? Ukuphupha izihlobo ezifile.
Kuthiwani uma lezi zihlobo zinephupho?
Ukubona kubantu bakho bomdabu bephupho uphawu oluyinkimbinkimbi olungabonakalisa injabulo, ukukhathazeka noma isenzakalo esibalulekile empilweni. Abanye bethu bathanda kakhulu futhi bayakwazisa, abanye, ukubeka kahle, ukubekezelela, emva kwakho konke, izihlobo. Futhi ukuze ungasebenzisi isikhathi sakho esiyigugu ukutadisha ukuhumusha kwezincwadi ezahlukene zokuphupha, sikhuthaza ukuba ufunde lesi sihloko, esineziningi zokuhumusha kwezincwadi ezithandwa kakhulu ngamaphupho. Ukuze uqonde ukuthi izihlobo ziphikisana ngani, sincoma ukuthi siqale, ukukhumbula isakhiwo sokulala kanye nezithombe lapho abantu bakho bomdabu babonakala khona.
Ukubona izihlobo ephusheni - kusho ukuthini lokhu?
Kubaluleke kakhulu ukuthi ubani obonile ephusheni lakho. Abazali bavame ukubikezela izinguquko ezinhle nezenzakalo ezijabulisayo ekuphileni kwethu. Abafowethu nodadewethu - isibonakaliso sokuthi impilo yakho ihamba ngendlela efanele futhi kukhona abantu abaseduze nawe abangakwazi ukusekela nokududuza. Ugogo nomkhulu bakufanekisela lokho esikhathini esizayo esiseduze kuzodingeka wenze isinqumo esibalulekile esiyingozi. Zama ukukhumbula, mhlawumbe bakutshele okuthile? Ngamazwi abo kungase kube khona indlela yokuxazulula le nkinga. Ngokuvamile amaphupho anjalo asebenza njengendlela yokuxhumana phakathi kwephupho kanye nezihlobo zakhe. Uma kukhona okungalungile okwenzekile kumuntu othandekayo ephusheni, mtshele ngaphandle kokulibala. Ukuze ugweme izinkinga, mcebise ukuthi ahambe esontweni futhi acele ukungabikho.
Funda lokho udadewethu (umzala nomzala wokuqala) amaphupho, lapha .
Uma ephusheni lakho kwakukhona izihlobo hhayi umugqa oqondile, khona-ke incazelo iyoba yinto engacacile. Kufanelekile ukunaka ukuthi ubuhlobo obunjani ngempela. Uma uhlala uxabana, iphupho elinjalo liyisiginali esicacile sokuthi umuntu wakho uveza ngokucacile lo muntu ngokukhanya okungadingekile, mhlawumbe ngisho nomona umphumela wakho impumelelo. Ukuze uzivikele emandleni angalungile omhloli, zama ukunciphisa ukuxhumana kwakho, uma kungenakwenzeka ngesikhathi ingxoxo zama ukungambheki emehlweni.
Funda ukuthi indodakazi iphupha ngani lapha .
Izihlobo ezifile ziphupha ngani?
Ungesabi uma ubona isihlobo esifile ephusheni. Lokhu akuyona neze isignali yenkinga noma isithembiso sokufa okuseduze. Abaphuphi bahumusha lo mbono njengesignali ukuthi wenza okuthile okungalungile empilweni yakho, abantu abaseduze bahlushwa izenzo zakho namazwi. Zama ukushintsha isimo sakho sengqondo kwabanye, bese ubona ukuthuthuka okucacile kuzo zonke izindawo zokuphila.
Abanye abahumushi bathi ukubona izihlobo ezifile kusho ukudumazeka okusheshayo kulaba bantu. Mhlawumbe ukhohlisiwe noma ukhonjwe. Futhi, amaphupho anjalo yiwona ohamba phambili ekuphikisana okusheshayo nokuhlambalaza.
Ukulila izihlobo ezifile, ke, ukukhala empeleni. Lezi kungaba izinyembezi zolaka nokuthokoza. Ukuthinta abafileyo - maduzane ukubamba umkhuhlane noma ukulimala. Ngendlela, kubalulekile ukuthi lezi amaphupho azivumelekile uma ziphuka ekuseni nasebusuku ngoLwesibili noma ngoMgqibelo.
Futhi ushonele, lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekile sokuthi isimo sezulu sizoshintsha maduzane. Ngokuvamile kuyiphupho lokuthulula imvula noma iqhwa. Ungamangazi uma usuku olushisayo luphuthuma ngesivunguvungu.
Njengoba ungabona, izihlobo zami eziphuphayo zinezincazelo ezahlukene nokuhumusha. Ngokuvamile, amaphupho anjalo afaka imicimbi engathathi hlangothi noma axwayise ngengozi. La maphupho kufanele athathwe ngokungathí sina, ngaphandle kokungazinaki izincazelo zawo. Mhlawumbe lokhu kuzokusiza kakhulu futhi kukuvikele ezinkingeni. Iphupho elimnandi nelomusa kuwe!
Kungani uthanda ukuhamba ngezintethe?
Amaphupho abesifazane abakhulelwe abakhetha ubulili bomntwana
Ukubona umfana wakho oyintandokazi ephusheni
Indlela yokwenza ingane yokuzalwa engcono kakhulu
Imiphumela yesidakwa sokuphuza utshwala
U-Amanda Bynes - ukulahlekelwa kweHollywood
Beading zezingane: namasongo enhle
Indlela yokufundisa kahle nokusheshisa ingane ukubhala kahle
I-Horoscope Aries ka-2011
Ukunakekela isikhumba esinenkinga ekhaya
I-Chocolate Mousse Recipe
Ungaphila umndeni wakho wesikhathi samahhala
Izibonakaliso zokuqala ze-appendicitis elula
Izikhala emfundweni yengane eneminyaka emithathu ubudala
Isaladi lekhakhamba nekhakhamba
Umnyango nemikhiqizo yawo yemilingo